'Io no vanim-potoana hiasa | Martech Zone
Alarobia, Novambra 23, 2011 Talata, Novambra 22, 2011 Douglas Karr
Vao haingana izahay no nandefa mailaka fanao tsara indrindra amin'ny vanim-potoana fialantsasatra, sary miaraka amin'ny torohevitra avy amin'ny Delivra, an mailaka barotra orinasa. Xobni, fitaovana famokarana boaty tena mahafinaritra, namoaka an'ity infographic mahakivy firy amintsika no hiasa ary hanamarina mailaka mandritra ny fialantsasatra mihitsy aza.
79% ny olon-dehibe miasa any Etazonia no milaza izany mandray mailaka miasa amin'ny fialantsasatra nentim-paharazana toy ny Thanksgiving, Hanukkah, Noely, sns. ary 68% amin'ny mailaka nekena fa nanamarina azy. Avy amin'ny fianarana
Mampalahelo fa 41% ny olona niaiky fa nanamarina ny mailaka satria mino izy ireo fa hanalefaka ny enta-mavesatra rehefa miverina avy amin'ny "fiatoana" izy ireo. Hmmm… Heveriko fa isaky ny alahady hariva ho ahy izany.
Ka raha te hohenoina ianao dia angamba ny mailaka mivoaka amin'ny fialantsasatra dia manararaotra misokatra kokoa! Mitandrema ihany anefa… 37% ny olona nanaovana fanadihadiana no niaiky fa mahatsapa izany sosotra, sosotra na tezitra rehefa nahazo mailaka mifandraika amin'ny asa amin'ny fialantsasatra. Fantatro izany - aza mandefa iray amiko! 🙂
Tags: ChannukahKrismasyhannukahfialan-tsasatraSary torohayfisaorana
Ahoana no nahatratrarantsika fomba fijery 100,000 isam-bolana